के हो प्रेम दिवस अर्थात भ्यालेनटाइन डे? : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
के हो प्रेम दिवस अर्थात भ्यालेनटाइन डे?
[0] February 14, 2018	| Rev. Dr. Bal Krishna Sharma
आज फेब्रुवरी १४ तारिखलाई मानिसहरुले भ्यालेनटाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस भनी मानिरहेका देखियो । यसका पक्ष र विपक्षमा टिका टिप्पणी पनि प्रशस्तै पढियो । वास्तवमा यो भ्यालेन्टाइन भनेको के हो त । भ्यालेनटाइन भनिने एक व्यक्ति थिए र जस्लाई रोममा सन्त भनी पछि स्वीकार गरियो । उनी एक पूजाहारी थिए र त्यस बेलामा उनले निषेध गरिएका सेनाहरुको विवाह गरिदिए । त्यस बेलामा सेनामा काम गर्नेहरुले विवाह गर्न पाउँदैनथे । रोमी साम्राज्यले ख्रीष्टियानहरुमाथि गरेको सतावटलाई उनले विरोध गरी तिनीहरुलाई सेवा गरेका थिए । यही आरोपमा उनले गरेको यो कामको कारण उनलाई झ्यालखानमा हालियो र अन्त्यमा उनलाई मृत्यु दण्ड दिइयो । उनले गरेको सेवाको बदलामा उनलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको थियो । उनको मृत्युभन्दा पहिले उनले न्यायाधीशकी छोरीको अन्धो आँखा खोलिदिएका थिए र उनलाई मार्नुभन्दा पहिले उनले ती न्यायाधीशकी छोरीलाई तिम्रो भ्यालेनटाइन भनी चिट्ठी लेखेर सही गरेका थिए ।
इस्वी सम्बत चौधौँ शताब्दीमा आएर भ्यालेनटाइन सन्तको नाउँमा प्रेम दिवस मनाउने चलनको शुरूवात गरियो र १८‍‍‌ ‌औँ शतब्दीमा बेलायतमा यसलाई प्रेमीलाई फूल उपहार दिने चलन चल्यो र आज त्यही चलनमा अडिएर प्रेम दिवसको नाउँबाट प्रचलित हुन पुग्यो । अहिले यसले जस्तो विकृत रूप धारण गरेको छ यो सन्त भ्यालेन्टाइनका लागि अनादर हो भन्ने मलाई लाग्छ । प्रेम आत्मिय हुन्छ र यदि त्यो प्रेममा पीडा र आनन्द मिसिएको छ भने त्यो साँचो प्रेम हो । यस दिनलाई सम्झिए पनि यसलाई विकृत रुपचाहिँ नदि‍औँ । यसो गर्नचाहिँ वलिदानिक जीवन जिएर अरुको सेवागर्ने सन्त भ्यालेन्टाइनप्रति अनादर हुनजान्छ । हामी विवेकशील मानव हौँ र हामीले ठीक र वेठीकका बीचमा छुट्टाउन सक्नुपर्छ । मानवजातिलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्छ र अनर्थ प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । धन्यवाद ।
« मान्छेलाई मान्छे नै रहन दिऔं
के ख्रीष्टियनहरू आफ्नो संख्या बढाउनकै निम्ति मात्र सेवाका काम गर्छन् ? के ती कामहरू सबै देखावटी मात्रै हुन् ? »